Wararka U Dambeeyey ee Coronavirus – WARSOOR
Wararka U Dambeeyey ee Coronavirus
Caalamka – (warsoor) – Caabuqa Coronavirus ayaa dunida si xawliya ugu sii fidiya waxaana hadda korodhka xanuunkan hogaaminaayey dalka Maraykanka.
Guud ahaan caalamka caabuqa coronavirus wuxuu ku dhacay 634,835 qof, waxaa u dhintay 29,957 qof. Waxaan ku fiday dalal gaadha 203 dal oo dunida oo dhan.
Dalalka uu xanuunkani aafeeyey waxaa saddexda kaalmood ee u horeeyey ku kala jira dalalkan:
Maraykanka – 103,321
Talyaaniga – 92,471
Shiinaha – 82,356.
Xogtan ayaa ah xogtii ugu dambeeysey ee ay baahiso hay’adda caafimaadka aduunka ee WHO 29 March, 2020 – 9-ka fiidinimo.
Ra’isalwasaare laga helay Coronavirus oo farriin digniin ah u diray shacabkiisa
War degdeg ah: Qarax ka dhacay magaalada Garowe oo qasaara geystay